Home » Entries posted by Mohamed Osman Habiib
Posted on 29, May 2017 by Mohamed Osman Habiib and saved under Arimha Qoyska, Warbxinada Maanta
Sidee xiriirka loogu jiraa qof aad weli jeceshahay? Qodobkan waxaa uu ka hadlayaa sida looga haro ama xiriirka loogu jiro qof ay naftaadu u baahan tahay,balse laga yaabo in aadan ka helin qiimeyntii aad mudneyd. Dad badan ayaa sanado la dhibaatooda Jaceylka qof ay kala hareen ilaa ay gaarto inay…
4 Sabab Oo Uu Qof Waliba U Raadiyo Guurka!
Posted on 28, May 2017 by Mohamed Osman Habiib and saved under Arimha Qoyska, Warbxinada Maanta
Guurka waa muhiim,waana wax ay ku hamiyaan inta badan bani’aadamkaoo dhan. Haddaba,Waa waxay sababta ay dadku u doonayaan Guurka? 1- UBAD KAA HARA:-Ujeedada guurka waa in lagu raaxeysto nolosha oo la dhalo carruur,si uusan meesha uga baxin tartanka dadka oo muhiim u ah jiritaan adduunka. 2-DHUFEYSI AAD KA GASHO SHEYDAANKA:Guurku…
Page 1 of 212	Nagala Soo Xariir